प्रदेश-३ – Page 161 – Halkaro
बाढीसँगै रोग्रस्त अर्नाको उपचार सुरु
प्रकाशित मिति : २०७४, ८ आश्विन आईतवार
चितवन । बाढीपछि रोगले ग्रस्त भएका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अर्नाको उपचार शुरु गरिएको छ । निकुञ्जका वरिष्ठ पशुचिकित्सक डा. कमल गैरेको नेतृत्वमा रहेको प्रविधिज्ञको टोलीले कोशीबाट स्थानान्तरण गरी चितवन निकुञ्जमा ल्याएका अर्नाको आजदेखि उपचार शुरु गरेको हो । बाढीपछि विभिन्न रोगको संक्रमण भएर अर्नाको अवस्था नाजुक देखियो, डा. गैरेले भने, ‘केही दिनदेखि घाँसपात तथा दाना […]
लागु औषधसहित दुई युवा पक्राउ
चितवन । चितवनमा लागुऔषधसहित दुईजना युवा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले भरतपुर महानगरपालिका–९ स्थित होटेल प्रिन्सबाट लागुऔषधसहित दुई जना पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा भरतपुर महानगरपालिका–३ वस्ने वर्ष २४ का निरज गुरुङ र भरतपुर महानगरपालिका–१० वस्ने वर्ष २४ को सन्तोष गुरुङ रहेका छन् । प्रहरीले उनीहरुको साथबाट नाईट्रोजेपाम ४०० ट्यावलेट, स्पास्मो प्रोक्सीम ७२ क्याप्सुल, […]
चितवन । पूर्वी चितवनको खैरहनी–४ स्थित कंकाली सामुदायिक वनभित्र एक युवकको शव फेला परेको छ । सामुदायिक वनभित्र आंशिक रुपमा सडेको अवस्थामा युवकको शव फेला परेको हो । मृतकको अनुहार सडेकोले एकिन सनाखत हुन कठिन भएको थियो । स्थानीयले खैरहनी १ निवासी २२ वर्षीय प्रशान्त रिजालको शव भएको आशंका गरेपछि मृतकका बाबुले शव सनाखत गरेका […]
युरिया मलको अभाव टर्दै
चितवन । चितवनमा केही समय यता अभाव देखिएको युरिया मल अब केही सहज हुँदै गईरहेको छ । सरकारी निकायले माग अनुसारको आपूर्ति गर्न नसक्दा केही सातायता चितवनमा युरिया मल अभाव भएको थियो । तर आईतबार देखि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले ५८ टन युरिया मल वितरण सुरु गरेपछि सहज वितरण हुँदै गएको हो । कृषि समाग्रीले […]
धामिर्क शहिषुणता फैलाउन प्रयास
चितवन । धार्मीक सहिष्णुतता खल्बल्याउन बौद्ध धर्मका धर्मग्रन्थ तथा धार्मीक साम्रगीहरुमा बिरोधी तत्वले क्षती पु¥याएको बौद्ध धर्म पुननिर्माण संघर्ष समितिका अध्यक्ष सिंह बहादुर गोलेले बताउनुभएको छ । उहाले धार्मीक निरपेक्ष घोषण गरिएको तथा कुनै किसिमका धार्मीक सांस्कृतिक द्धन्द्ध नभएको हाम्रो देशमा बौद्ध धर्मका धर्मग्रन्थ तथा धार्मीक साम्रगीहरुमा क्षती पुग्नु निन्दनिय भएको बताउनुभएको छ । भरतपुर […]
चितवन । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले नेपालीहरुको महान पर्व दसैँ, तिहार र छठको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरेको छ । अनौपचारिक रुपमा गरिएको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष राजन गौतमले शुभकामना दिएका थिए । शुभकामना प्रदान गर्दै उद्योग वाणिज्य संघले पहिलो पटक अनौपचारिक रुपमा दसैँको शुभकामना कार्यक्रम गरेको र यसको निरन्तरता जरुरी रहेको बताए […]
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर सातका जेष्ठ नागरिकलाई नेपाल तरुण दलले सम्मान गरेको छ । ८० वर्ष नाघेका बृद्धबृद्धालाई तरुण दलको वडा समितिले सम्मान गरेको हो । शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वडावासी जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान पत्र दोसाल्ला ओढाएर पौष्टिक आहार प्रदान गरिएको हो । कार्यक्रममा एक सय जनालाई सम्मान गरिएको थियो । सामाजिक […]
कोशी टप्पुबाट स्थानान्तरण गरिएका अर्नाको अवस्था नाजुक
चितवन । कोशी टप्पुबाट स्थानान्तरण गरी यहाँ ल्याइएका अर्नाको स्वास्थ्य नाजुक बन्दै गएको छ । गत साउन अन्तिम साता आएको बाढीले घाँसे मैदान र पानी पोखरी पुरिएको, पानी प्रदूषित भएको र आवश्यक खानाको अभावका कारण अर्नाको स्वास्थ्य बिग्रेको हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलका अनुसार बाढीपछि दुई अर्ना मरिसकेका छन् भने […]
भरतपुरको विकासका लागि एकता आवश्यक
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले सम्भावना नै सम्भावनाले भरिएको भरतपुर महानगरको विकास र समृद्धिका लागि एकताको खाचो रहेको बताउनुभएको छ । महानगरपालिकाको वडा न ५ को नारायणपुरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उहाले आफ्ना योजनाहरु पूरा गर्न सबैको रचनात्मक सहयोग चाहिने बताउनु भएको छ । शहरी र ग्रामीण क्षेत्रको विकास सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने […]
चिकित्सक कृष्ण पौडेलको खुसीहरुको वनबास सार्वजनिक
प्रकाशित मिति : २०७४, ५ आश्विन बिहीबार
चितवन । चिकित्सक कृष्ण पौडेल किसुनको ‘खुसीहरुको वनबास’ कविता संग्रह बिहीबार सार्वजनिक भएको छ । चितवन साहित्य परिषद्को आयोजनामा खुसीहरुको वनबासको सार्वजनिकीकरण कविता वाचन एवम् संवाद कार्यक्रम गरिएको हो । किसुनको कविता संग्रहको बारेमा समालोचक एकनारायण पौडेल र उदय अधिकारीले समीक्षा गरेका थिए । किसुनको कविता संग्रह सरल र सहज तरिकाले लेखिएको उल्लेख गर्दै एकनारायण […]